Woodworking Router Plate - China CHQ Tools
လက်သမား Tools များ
Wood ကစားပွဲတင် Router
Adjustments စားပွဲတင် Feather ဘုတ်အဖွဲ့
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: OEM / လိမ္မော်ရောင်
Delivery အချိန်: 25-35 ရက်အတွင်း
package အသေးစိတ်: အရောင် box ကိုထိုးနှက်မှိုအမှုသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
Woodworking router ပြား 1056
item အမည် router ပြား
item အမှတ် 1056
အမှတ်တံဆိပ် OEM / လိမ္မော်ရောင်
ပို့ဆောင်ချိန် 35-45 ရက်အတွင်း
package အသေးစိတ် အရောင် box ကိုပုံး Box ကို
နည်းပညာဆိုင်ရာဖျေါပွခကျြ အလေးချိန်: 1.3 ကီလို
ယေဘုယျအားအရှည် (WXHXD): 11-3/4 "x ကို 9-1/4" X3 ပာ / 8 "alumnium (298.5X235X9.5mm)
installation ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ: 1-3 / 8 "Insert လက်စွပ်, လူမီနီယမ်စင်တာတွင် Ring ကိုနှင့် 1/2" Mandril
အပါအဝင်: (1)2"Insert Ring ကို, (1) Ring ကိုလိမ်ဖဲ့ခြင်း, (10) အဆင့်ဝက်အူ, (1) hex လိမ်ဖဲ့ခြင်း
ပရီမီယံ 6061 လူမီနီယံ, Hard Anodized များအတွက် CNC စက်ပစ္စည်း
ကုန်ပစ္စည်းလက်ခဏာ 1. 3/8 "-thick ချုံ့-ပုံသွင်းဖင်နိုလစ်ပန်းကန် SAG မည်မဟုတ်ကြောင်းအပြားပြားမျက်နှာပြင်ကိုထောက်ပံ့ပေး
2. 9-1/4 "x ကို 11-3/4" အရွယ်အစားကိုအလွယ်တကူကြီးမားသော router များရှိကြတယ်
3. တိကျစွာဘုံ 3-အပေါက်သည် PC-စတိုင်ပုံစံကို အသုံးပြု. အကြိမ်ကြိမ် router များ mount မှ Predrilled
pin ကိုများနှင့်အဆင့်-လော့ကျွန်းလိမ်ဖဲ့ခြင်းနှင့်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်စတင်ဖြုတ်ကြေးဝါကို 4.Includes
5. ကွင်းလျှော့ချအဆင့်-လော့ကျွန်း of2 သုံး bit နဲ့ဖွင့်လှစ်အရွယ်အစားသည် "1-3/8"
အရောင်သေတ္တာ 32x26x8 CM
အရေအတွက် 10 PCs
GW / ကဘ 14/16 ကီလို
ယခင်: Woodworking Router Table Top MDF
နောက်တစ်ခု: သစ်သားထည် Feather ဘုတ်အဖွဲ့
လူမီနီယမ် Insert ပြား
MDF Router ဇယား
သစ်သားထည် Tool ကိုများအတွက်သစျပွုပွငျပြား
ပလပ်စတစ် Feather ဘုတ်အဖွဲ့
router ဇယားထိပ်ဆုံး MDF
သစ်သား Router ဓာတ်လှေကား
သစ်သားထည် Router စားပွဲတင်
E-mail ကို: cherry@chqtools.com
နေရပ်လိပ်စာ: No.90, Wener လမ်း, Ningbo စီးတီး, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်
CHQ Tools များ